हाम्रो बारे - व्यवसायका लागि डिजिटल साइनेज र भिडियो वाल सफ्टवेयर
हो, हामी वास्तविक व्यक्तिहरू हौं! हाम्रो बारे मा अधिक जान्नुहोस्!
वैट कम्टमेन्ट, फर्मेन्ट, रुसिटमा।
- नेपोलियन बोनापार्ट -
पैट्रिस इजि मल्टी डिस्प्लेको टेक्निकल संस्थापक हो। उहाँ फ्रान्सेली हुनुहुन्छ, year 45 वर्ष पुरानो स्वयं घोषित गीक जो टेक्नोलोजीद्वारा मोहित छन्। यहाँ उहाँ अन्तिम अभिनव इलेक्ट्रिक बाइक चलाउँदै हुनुहुन्छ काउओबी Bruxelles मा।
पैट्रिस एक बहादुर उद्यमी हो र सफ्टवेयर डिजाईन गर्दै छ भिट्रिन मल्टिमेडिया १ 15 बर्ष भन्दा बढीको लागि। उनका केहि ग्राहकहरु मा एयरबस, युनिसेफ, भिसा, क्यानन सामिल छन्।
प्रत्येक वर्ष केहि सप्ताहन्तमा, पैट्रिसले आफ्नो सामान्य तालिकामा समयको रूपमा कार्य गर्दछ भिडियो जाकी.
केटा ईजी मल्टि डिस्प्लेको लागि व्यवसायिक नेता हो। Guy 44 वर्ष पुरानो केटा, जोखिम लिने व्यक्ति हो, दुवै फ्रान्सेली र भियतनामी मूलका साथ। केटा आफ्नो दुई बच्चाहरु लाई आफ्नो जीवनको सब भन्दा राम्रो साहसिक मान्नुहुन्छ! ब्रसेल्स शोरूममा यो केटा र उनकी छोरी आइरिस हुन्।
Years बर्षमा क्यारेफोरका लागि आईटी प्रोजेक्ट प्रबन्धकको रूपमा काम गरिसकेपछि, उनी १5बर्ष भन्दा बढी समयदेखि उद्यमीको रूपमा कार्यरत छन्। केटा कुराकानी गर्न र ठोस सम्बन्ध निर्माण गर्न मन पराउने सजिलो व्यक्ति हो। केटा र पैट्रिस भेटे, जब केटा आफ्नो डिजिटल वार कोठा को लागी एक डिजिटल signage सफ्टवेयर खोज्दै थिए। यो पहिलो नजरमै मित्रता थियो।
यद्यपि गायले कहिलेकाँही जीवनलाई जटिलको रूपमा देख्छ, विशेष ब्यक्तिहरूसँगको करार पछि, उनले आदर्श वाक्यलाई प्रेम गर्दछ ...
- जो जीत को हिम्मत। -
यदि तपाईं हामीलाई सम्पर्क गर्न चाहानुहुन्छ भने, कृपया "मा सन्दर्भ गर्नुहोस्।हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस"पृष्ठ।
नि: शुल्क परीक्षण डाउनलोड गर्नुहोस्
द्रुत पहुँच प्राप्त गर्नुहोस्